အခုလို ချိန်မှာ အလှူ ရှင် မရှိတာ ကြောင့် ကလေး အယောက် (၅၀) ကျော် တွက် စားရေး သောက်ရေးပါ ခက်ခဲ နေရတဲ့ မိဘ မဲ့ ဂေဟာလေး – GaMone Media
Homepage / Local News / အခုလို ချိန်မှာ အလှူ ရှင် မရှိတာ ကြောင့် ကလေး အယောက် (၅၀) ကျော် တွက် စားရေး သောက်ရေးပါ ခက်ခဲ နေရတဲ့ မိဘ မဲ့ ဂေဟာလေး
အခုလို ချိန်မှာ အလှူ ရှင် မရှိတာ ကြောင့် ကလေး အယောက် (၅၀) ကျော် တွက် စားရေး သောက်ရေးပါ ခက်ခဲ နေရတဲ့ မိဘ မဲ့ ဂေဟာလေး
အခုလို ချိန်မှာ အလှူရှင် မရှိတာကြောင့် ကလေး အယောက် ၅၀ ကျော် တွက် စားရေး သောက်ရေး ပါ ခက်ခဲနေရတဲ့ မိဘမဲ့ ဂေဟာလေးမြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သားတွေရဲ့ နဂို စိတ်ရင်းအ ခံက အလှူအတန်း ရက်ရောကြ တာဖြစ်လို့ ဒီလိုကာလ မျိုးမှာ ပိုပြီးတော့ တောင် လှူဒါန်းနေ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာဆိုရင် စီးပွါးရေးကျ ပ်တည်း ကြပေမယ့် အကူအညီ လိုအပ်နေ ကြတဲ့သူ တွေကို မိမိတို့ စတယ်။ အခုလို အချိန် မျိုးမှာမိဘမဲ့ ဂေဟာတွေ အတွက်လည်း စေတနာ ရှင်တွေ က တတ်နိုင် သလောက် လှူဒါန်းနေ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် စေတနာရှင် ပြည်သူ တစ်ဦးကတော့ဒလ ဘက်မှာရှိတဲ့ မိဘမဲ့ ဂေဟာ ကို သွားရောက်ပြီး ကလေးတွေ အတွက် လိုအပ်တာ လေးတွေ လှူဒါန်း ခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။ မိဘမဲ့ ဂေဟာလေးက ဒလဘက်က ကျူးကျော် လိုနေရာ မျိုးမှာ တဲလေးတွေထိုးပြီး တာလပတ် လေးတွေနဲ့ ကာထားတာဖြစ်လို့
အခုလို နွေရာသီမှာ ကလေးတွေ မခံနိုင် လောက်အောင် အရမ်းပူနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ မိဘမဲ့ ဂေဟာ လေးကို လူသိပ်ပြီး မသိ ကြတာကြောင့် ပုံမှန်အချိန် မှာဆိုရင်တောင် အလှူရှင်ကနည်းပါး တာဖြစ်ပြီး ကလေး အယောက် ငါဆယ် ကျော်အတွက် စားရေး၊ သောက်ရေး ခက်ခဲ နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကလေး အယောက် (၅၀)အတွက် တစ်ရက်စာ အလှူဆိုရင်တော့ တစ်သိန်းကျပ် လောက် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် ဝတ်စရာ အကျႌနည်းပါး လို့တောင်(၃) နှစ်အရွယ် ယောက်ျားလေး ကို ဂါဝန်လေး ဝ တ်ပေး ထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အချိန်မျိုးမှာ အလှူရှင် ပိုနည်းနေတဲ့ အတွက် ကလေးတွေ အတွက် အရုပ်တို့၊ အကျႌတို့ကို လည်း တစ်နို င်တစ်ပိုင် လေးလှူဒါန်း လို့ရပါ သေးတယ်။“သား သား အသားမဖဲ့ တတ်လို့ ထမင်းခွံ ကျွေးပေးပါလား” တဲ့ ၃ နှစ်အရွယ် ကလေးလေး က အဲ့ဒါ သမီးလေးလား ဆိုပြီးမေးတော့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ဝတ်စရာမရှိလို့ ဂါဝန် ပေးဝတ် ထားတာပါတဲ့ ၂
နှစ်ကလေးလေး တယောက်… အဲ့ဒါ ကတော့ ဒီနေ့ သွားလှူ ဖြစ်တဲ့ ဒလဖက်က မိဘမဲ့ ဂေဟာက လေးပါ ကျူးကျော် လို နေရာမျိုးမှာ တဲလေးတွေကို တာလပတ် လေးတွေနဲ့ နေက အရမ်းပူတော့ ကလေးတွေ လဲတော်တော် ပူကြတယ် ကိုယ်တွေတောင် မခံနိုင်ဘူး အငယ်ဆုံး လေးက ၂ လ အကြီး ဆုံး သမီးလေးက ၁၄ နှစ်ပါတဲ့… ပုံမှန်အချိန်တောင် အလှူရှင် နည်းပါတယ် လူသိပ် မသိလို့ … ခုလိုအချိန်ဆို အလှူရှင် မရှိဘူးတဲ့ လှူချင်တဲ့ သူတွေရှိရင် မဂျူးကို လာပြော ပေးကြပါဦး တရ က်စာ အလှူဆို မနက်စာ နေ့လည်စာ ညစာကို တ စ်သိန်း ကျပါတယ်… တခြား အကျီတို့ အရုပ်တို့လှူချင်လဲရ ပါတယ်နော်.. ကလေးတွေကို နောက်တ ခေါက် ထပ် လာခဲ့မယ် ကတိပေးခဲ့တယ် မိဘ မဲ့ ဂေဟာလေး ကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားရော က်ပြီး လှူဒါန်းချင်တဲ့ စေတနာ ရှင်တွေ အတွက်လည်း (Nom 1100/11: Maha Ba Khaing Street: Kyan Sitt Thar Quarter. 0976603 5963) ကို ဆက် သွယ် လှူဒါန်းနိုင် ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အခုလို ခ်ိန္မွာ အလႉရွင္ မရွိတာေၾကာင့္ ကေလး အေယာက္ ၅၀ ေက်ာ္ တြက္ စားေရး ေသာက္ေရး ပါ ခက္ခဲေနရတဲ့ မိဘမဲ့ ေဂဟာေလးျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သားေတြရဲ႕ နဂို စိတ္ရင္းအ ခံက အလႉအတန္း ရက္ေရာၾက တာျဖစ္လို႔ ဒီလိုကာလ မ်ိဳးမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ေတာင္ လႉဒါန္းေန ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာဆိုရင္ စီးပြါးေရးက် ပ္တည္း ၾကေပမယ့္ အကူအညီ လိုအပ္ေန ၾကတဲ့သူ ေတြကို မိမိတို႔ စတယ္။ အခုလို အခ်ိန္ မ်ိဳးမွာမိဘမဲ့ ေဂဟာေတြ အတြက္လည္း ေစတနာ ရွင္ေတြ က တတ္ႏိုင္ သေလာက္ လႉဒါန္းေန ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ေစတနာရွင္ ျပည္သူ တစ္ဦးကေတာ့ဒလ ဘက္မွာရွိတဲ့ မိဘမဲ့ ေဂဟာ ကို သြားေရာက္ၿပီး ကေလးေတြ အတြက္ လိုအပ္တာ ေလးေတြ လႉဒါန္း ခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။ မိဘမဲ့ ေဂဟာေလးက ဒလဘက္က က်ဴးေက်ာ္ လိုေနရာ မ်ိဳးမွာ တဲေလးေတြထိုးၿပီး တာလပတ္ ေလးေတြနဲ႔ ကာထားတာျဖစ္လို႔
အခုလို ေႏြရာသီမွာ ကေလးေတြ မခံႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ အရမ္းပူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ မိဘမဲ့ ေဂဟာ ေလးကို လူသိပ္ၿပီး မသိ ၾကတာေၾကာင့္ ပုံမွန္အခ်ိန္ မွာဆိုရင္ေတာင္ အလႉရွင္ကနည္းပါး တာျဖစ္ၿပီး ကေလး အေယာက္ ငါဆယ္ ေက်ာ္အတြက္ စားေရး၊ ေသာက္ေရး ခက္ခဲ ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကေလး အေယာက္ (၅၀)အတြက္ တစ္ရက္စာ အလႉဆိုရင္ေတာ့ တစ္သိန္းက်ပ္ ေလာက္ က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြအတြက္ ဝတ္စရာ အက်ႌနည္းပါး လို႔ေတာင္(၃) ႏွစ္အ႐ြယ္ ေယာက္်ားေလး ကို ဂါဝန္ေလး ဝ တ္ေပး ထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အလႉရွင္ ပိုနည္းေနတဲ့ အတြက္ ကေလးေတြ အတြက္ အ႐ုပ္တို႔၊ အက်ႌတို႔ကို လည္း တစ္ႏို င္တစ္ပိုင္ ေလးလႉဒါန္း လို႔ရပါ ေသးတယ္။“သား သား အသားမဖဲ့ တတ္လို႔ ထမင္းခြံ ေကြၽးေပးပါလား” တဲ့ ၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးေလး က အဲ့ဒါ သမီးေလးလား ဆိုၿပီးေမးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့ ဝတ္စရာမရွိလို႔ ဂါဝန္ ေပးဝတ္ ထားတာပါတဲ့ ၂
ႏွစ္ကေလးေလး တေယာက္… အဲ့ဒါ ကေတာ့ ဒီေန႔ သြားလႉ ျဖစ္တဲ့ ဒလဖက္က မိဘမဲ့ ေဂဟာက ေလးပါ က်ဴးေက်ာ္ လို ေနရာမ်ိဳးမွာ တဲေလးေတြကို တာလပတ္ ေလးေတြနဲ႔ ေနက အရမ္းပူေတာ့ ကေလးေတြ လဲေတာ္ေတာ္ ပူၾကတယ္ ကိုယ္ေတြေတာင္ မခံႏိုင္ဘူး အငယ္ဆုံး ေလးက ၂ လ အႀကီး ဆုံး သမီးေလးက ၁၄ ႏွစ္ပါတဲ့… ပုံမွန္အခ်ိန္ေတာင္ အလႉရွင္ နည္းပါတယ္ လူသိပ္ မသိလို႔ … ခုလိုအခ်ိန္ဆို အလႉရွင္ မရွိဘူးတဲ့ လႉခ်င္တဲ့ သူေတြရွိရင္ မဂ်ဴးကို လာေျပာ ေပးၾကပါဦး တရ က္စာ အလႉဆို မနက္စာ ေန႔လည္စာ ညစာကို တ စ္သိန္း က်ပါတယ္… တျခား အက်ီတို႔ အ႐ုပ္တို႔လႉခ်င္လဲရ ပါတယ္ေနာ္.. ကေလးေတြကို ေနာက္တ ေခါက္ ထပ္ လာခဲ့မယ္ ကတိေပးခဲ့တယ္ မိဘ မဲ့ ေဂဟာေလး ကို ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် သြားေရာ က္ၿပီး လႉဒါန္းခ်င္တဲ့ ေစတနာ ရွင္ေတြ အတြက္လည္း (Nom 1100/11: Maha Ba Khaing Street: Kyan Sitt Thar Quarter. 0976603 5963) ကို ဆက္ သြယ္ လႉဒါန္းႏိုင္ ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
Previous post အန္တရာယ်တွေ ကြားကနေ ဆိုင်ကယ် နဲ့ မရမက သွားပြီး ကျည်ထိနေ တဲ့ လူနာ ကို ကူညီ ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းများ
Next post ချစ်ခင် ရတဲ့ ညီလေး တစ်ယောက် လူထု လှုပ်ရှားမှု မှာ ပါဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ အတွက် စိတ်ထိခိုက် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ G FATT